dimanche, 30 octobre 2016 16:43
Trafika andramena : Mitady hanilihana ny rihatra ny Fanjakana
Manantanteraka ny fanamby nataony tany tamin’ny fivorian’ny CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) farany teo ny Fanjakana fa mila hampigadra ireo mpanao trafika andramena.
vendredi, 28 octobre 2016 05:44
Soamahamanina : L'ONU saisi
Après les diverses agressions, violences, arrestations arbitraires, une délégation de la population de Soamahamanina a rencontré John H. Knox, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Droits de l’homme et l’environnement. Soamahamanina exige qu'on libère leurs leaders, qu'on restitue leurs terres, que l'exploitation aurifère par les Chinois, source de destruction de leur environnement, s'arrête.
jeudi, 27 octobre 2016 10:01
Sary Sobika Foulpointe
Foulpointe : Nitrangana haintrano goavana
Ny eo tsy tafarina, ny loza misosoka ihany. Nitrangana haintrano tao Antanambaovao, Kaominina Ambanivohitra Mahavelona Foulpointe ny harivan’ny alarobia 26 oktobra 2016. Mbola tsy fantatra mazava ny antony nihavian’ny afo fa potika ny trano sy ny entana maro. Iray volana lasa izay dia trano 112 tafo no may kila hotohoton’ny afo tao Foulpointe, izay namela traboina 386 mianaka.
mercredi, 26 octobre 2016 06:43
CUA: Tsy tompon'antoka amin'ny fahafatesana vokatry ny fahatairana izahay
Taorian'ny fahafatesan'ilay ramatoa mpivarotra vokatry ny fanalana ny mpivarotra amoron-dalana dia nanao fanambarana ireo teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa tsy marina avokoa ireo vaovao nahelin’ireo haino aman-jery mahakasika ny fahafatesan’ilay vehivavy iray manoloana ireo mpitandro ny filaminana monisipaly. Nanamarika izy ireo fa dia ny lalàna no hampiarina eto aminy tany sy ny fanjakana fa tsy ny mpanao gazety indray no andeha hisintona ireo olona hanao fitokonana. Maty vokatry ny fahatairana hoy hatrany ity tompon'andraikitra eo anivon'ny CUA ity ilay ramatoa, ary ny Kaominina tsy miantoka ny resaka fahatairana ary mbola mpampitandina ireo izay mbola te hivarotra amoron-dalana fa tsy andefitra ny Kaominina.
EPP Ambohipo: Tsy manaiky ny anoloana ny Tale
Mitokona ireo Ray amandrenin'ny mpianatra etsy amin'ny EPP Ambohipo.Tsy manaiky ny fanesorana ny Talen-tsekoly.
dimanche, 23 octobre 2016 18:46
Anjanahary : Zazalahikely maty voahitsaky ny taksibe
Taksibe sprinter, nifanenjika tao anaty lalan-tery nefa tsy nifandefitra no nitera-doza io tolakandro io teo Anjanahary –Boriborintany faha-V, Antananarivo.
vendredi, 21 octobre 2016 08:46
CEG Ambohipo: Hidiran'ny sekta ny Sekolim-panjakana
Nanaitra ireo Ray aman-drenin'ny mpianatra ny nahita ireto mpitory teny fivavahana, niaraka tamin'ny vahiny miteny angilisy io maraina 21 oktobra tamin'ny 7ora fidiran'ny mpianatry ny CEG tetsy Ambohipo.
jeudi, 20 octobre 2016 21:28
Forello Expo Tanjombato: Salon de l'habitat 20-23 octobre 2016
Nosokafana tamim-pomba ofisialy androany ny Salon de l'Habitat teny amin'ny Parc d'exposition Forello Tanjombato, izay maharitra efatr'andro ka ny alahady izao no hifarana. Nisy moa ny lanonam-panokafana izay natao teny an-toerana.
mercredi, 19 octobre 2016 06:42
COMESA 2016: Fihaonan'ny Filoha
Nihaona teny amin’ny CCI Ivato ireo filoham-panjakana avy atsy antsinanana sy atsimon’ny Afrika izay noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny marainan'ny talata 18 oktobra 2016 teo amin'ny CCI Ivato. Nisongadina teny fahatongavan’ny filoham-pirenena Zimbaboanina Robert Mugabe, izay izy irery tamin'ny Filoha 19 nandrasana moa no tonga nanome voninahitra izao fanokafana izao.Natolotra ihany koa ho an'ny Filohampirenena Malagasy ny fitantanana ny Comesa hatramin'ny taona 2017. Anio alarobia moa no famaranana ofisialy an’ity COMESA 2016 ity.
mardi, 18 octobre 2016 09:55
COMESA : Navoaka hatramin’ny fiara mifono vy an’ny foloalindahy
Manemitra ny arabe eo anelanelan’Ivato sy Iavoloha ireo fiara mifono vy an’ny foloalindahy, ho fanamafisana ny fiarovana mandritra ny fisian’ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mandray anjara amin’ny Fihaonambe faha-19 ny COMESA tanterahina anio sy rahampitso eny amin’ny CCI Ivato.